Personal VPN — MYSTERY ZILLION
September 2012 edited September 2012 in Internet & Email
Personal VPN ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ. ကျနော်နာကိုမလည်ဘူးဗျ ဘယ်လိုသုံးရမှာလဲဆိုတာကိုလည်း၊
ကျနော်က အင်တာနက်လိုင်းကို တရုတ်လိုင်းနဲ့သုံးတာပါ အဲမှာ Facebook,Youtube...အဲလိုမျိုးတွေဖွင့်လို့မရဘူးခင်ဗျ ဘန်းထားတယ် တစ်ယောက်ကပြောတော့ Personal VPN နဲ့ သုံးရင်ရတယ်တဲ့။။ အဲဒါလေ ဘယ်လိုအသုံပြုရတာလဲ အသေးစိတ်လေးရှင်းပြစေကြပါအုံးခင်ဗျာ. နောက်အဲဒါကောင်းက ပိုက်ပိုက်ပေးပြီသုံးရတာလား ဖရီးသုံးရတာလားနော်.......ကူညီပေးကြပါအုံး..ခင်ဗျာ...
www.justfreevpn.com is free personal vpn.